Ko Aung Gyi Gsc, A Burmese Martyr: Assassinated by Terrorists in Malaysia « Burma Democratic Concern (BDC)
Home » Burma Democratic Concern (BDC) » Ko Aung Gyi Gsc, A Burmese Martyr: Assassinated by Terrorists in Malaysia
Ko Aung Gyi Gsc, A Burmese Martyr: Assassinated by Terrorists in Malaysia
ပြီး ခဲ့တဲ့ နှစ် က မ လေးရှား နိုင် ငံတွင် မြန်မာ လုပ်သား များ အသတ်ခံရတုန်း က မီဒီယာ များ ကို သတင်းပေး ခဲ့သူ မ လေးမှာ ရှိတဲ့ မြန်မာ သံရုံး ရှေ့ မှာ မြန်မာ လုပ်သား တွေကို ကူညီဖို့ ဆန္ဒပြခဲ့သူ ကို အောင်ကြီး ( 88 မျိုးဆက် မ လေးရှား ) သည် ဖေ ဖော်ဝါရီလ ၄ ရက် နေ့ တွင် အသတ်ခံ လိုက် ရ ကြောင်း သတင်း ရရှိ သဖြင့်မိသား စု နှင့် ထပ်တူ ထပ်မျှ ဝမ်းနည်း ရပါကြောင်း။ (Posted by SeñorAye Thein)
ရခိုင်လူကြီးတွေကလဲသတိမထားကြလို့ပါ သူတို့KLမှာပွဲလုပ်တဲ့နေ့ ၄ ရက်နေ့ကလဲရခိုင်လူမျိုးနိုင်ငံရေးသမားမျိုးချစ်တဲ့ ကိုအောင်ကြီးGSC ဆိုတဲ့ကျွန်တော့်ဘော်ဒါလက်တွဲဖက်တယောက် ရခိုင်ပွဲကပြန်ပြီးမကြာခင် ပြောရရင်တော့ညနေ ၄ နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာအသတ်ခံလိုက်ရပါတယ်အလောင်းကိုသူ့ရဲ့ကာနောက်ဖုံးထဲထည့်ပြီးကားကိုချရကိစ်ဘာရူးရဲစခန်းအနားလာပြန်၇ပ်ထားတာတွေ့လို့ရဲကစစ်ဆေးလို့တွေ့ရှိရပါတယ် သတ်တဲ့သူကတော့ချရတ်စ် ဘာရူးက ကားဆေးမှုတ်ရုံတခုကကုလားနဲ့သူရဲ့အပေါင်းအပါတသိုက်ပါ ဒဏ်ရာတွေကတော့ နထင်ကိုဝက်အူလှည့်နဲ့ထိုးထားတယ်တစ်ကိုယ်လုံးကိုဝက်အူလှည့်နဲ့ထိုးထားတယ် နောက်ဆက်ကိုခဲနဲ့ထုထားတယ် လည်ပင်းကိုဓားနဲ့ပိုင်းလို့နဲ့တူတယ်လက်နဲ့ကာလို့ဖြစ်မယ်လက်နှစ်ဖက်လုံးပြတ်လုပြတ်ခင်ပဲတော်တော်ရက်စက်တဲ့သတ်နည်းနဲ့လုပ်ထားတာပါ ပုံစံအ၇ဆိုရင်အုပ်စုနဲ့လုပ်တဲ့ပုံပါအနဲဆုံး ၃ယောက်လောက်ရှိရမယ်လူသတ်သမားတွေဟာ ပ၇ိုဖက်စ်ရှင်နည်အဆင့်လူသတ်သမားတွေပါသွေးအေးမယ့်ပုံလဲရတယ် ပြီးတော့ ၅ ရက်နေ့မှကြတော့ပလာစာကထွက်လာတဲ့ရခိုင်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေကိုသေနတ်နဲ့ပစ်ခဲ့တာပဲ သေချာစဉ်းစားကြည့်ပါ ဒါဟာတကယ့်ကိုအကွက်ချပြီးလုပ်ခဲ့တာဆိုတာသိသာလွန်းပါတယ် မြန်မာ ပြည်သူပြည်သားတို့လဲသွေးစည်းကြဖို့အချိန်တန်ပြီလိုကျွန်တော်ထင်တယ် သူတ်ို့တွေကပညာသားပါပါနဲ့လုပ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လဲလိုင်းပေါ်မှာတင်ဆဲဆိုနေမယ်အစား ပညာသားပါပါနဲ့စည်းလုံးစွာပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ကြပါစို့ ။ (Posted by Aung Myatthu)
ကောင်ရာ သုဂတိ လား ပါစေ အကို ဘဝဆက်တိုင်း မင်းစိုးမင်းညစ်များ လူယုတ်မာ များနှင့်ကင်း ဝေးပါစေ … Aung Gyi Gsc (Posted by မင်း သူ )
အခုညီတို့ကို ယုံကြည်မှုဖြင့် တော်လှန်ရေးကိုအပ်ခဲ့ပြီပေါ့ အကိုပြောခဲ့သောစကားတွေအမှတ်ရနေသည်
ရဲဘော် သင့်အား အလေးနီပြုလျှက်
တင်ထွဋ်ပိုင် — with Aung Gyi Gsc. (Posted by တင်ထွဋ်ပိုင်)
ကျူးကျော်စော်ကားလာတဲ့ ဘင်္ဂလီအရေးကို ကိုယ်စွမ်းအား၊
ဥာဏ်စွမ်းအားနဲ့ တတ်စွမ်းသမျှ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနဲ့
ထပ်တူ စွမ်းစွမ်းတမံ တွန်းလှန်ပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့သူ့…
ဘင်္ဂလီကုလားဆိုးများရဲ့ အကြံအစည် လက်ချက်နဲ့
မလေးရှားနိုင်ငံမှာ လုပ်ကြံခံရပြီး ကျဆုံးသွားခဲ့ရသူ…
ko Aung Gyi Gsc တစ်ယောက် ကောင်းရာ သုဂတိလား
ပါစေ…။ — feeling sad. (Posted by Tun Naing Soe )
အကိုကသာ အားလုံးဟာလူသားတွေပါပဲပြောနေတာ။အခု လူသားတွေမတူကြောင်း အကို့လိုစိတ်မထားကြောင်း အကို့ကိုသတ်တဲ့ကောင်တွေက ပြသွားပြီ။ စိတ်မကောင်းလိုက်တာအကိုရာ။ အကိုကောင်းရာသုကတိရောက်ပါစေ။ — with Aung Gyi Gsc. (Posted by Htet Akar Soe)
မလေးရှားနိုင်ငံရောက် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အမျိုးသားရေး အလုပ်သမားအရေးများအား တက်ကြွစွာလှုပ်ရှားနေတဲ့ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသား ကိုအောင်ကြီး ဂျီအက်စ်စီ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းခံရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ ကိုအောင်ကြီးဟာ ကျနော်ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွခ်မိတ်ဆွေတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစု ဖေ့စ်ဘွခ်မိတ်ဆွေများ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူ ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါကြောင်း။ — with Aung Gyi Gsc. (posted by Ko Zaw Win)
မလေးရှားနိုင်ငံရောက် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားကိုအောင်ကြီး ဇန်နဝါရီ၃ရက်က
မလေးရှားနိုင်ငံမြန်မာသံရုံးရှေ့မှာ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေတဲ့ပုံပါ။ Aung Gyi Gsc (Posed by Nyein Chan)
မိသားစု၊ မိတ်ဆွေ သူငယ်အားလုံးနဲ့ ထပ်တူထပ်မျှ ဝမ်းနည်းရပါတယ်…အစ်ကို Aung Gyi Gsc … အစ်ကို ကောင်းရာသုဂတိ လားပါစေကြောင်း ဆုတောင်းပေးရုံပဲ တတ်နိုင်ပါတော့တယ်… (Posted by Nanda Htoon )
Ashin Htavara ဆုံးရှူံးမှုအတွက် ၀မ်းနည်းကြေကွဲရပါသည်
Tags: arakan, Arakanese, Aung Gyi Gsc, Buddhism, Buddhist, Burma, burmese, Islam, Malysia, musilms, Myanmar
← အသတ်ခံရသူ ကိုအောင်ကြီးရဲ့ ဇနီးနဲ့ မေးမြန်းချက်	Myo Yan Naung Thein will meet Germany President →